भारतमा कोरोना संक्रमितकाे संख्या ह्वात्तै बढेपछि मोदीले गरे यस्तो घोषणा, भारतभर हलचल — Sanchar Kendra
भारतमा कोरोना संक्रमितकाे संख्या ह्वात्तै बढेपछि मोदीले गरे यस्तो घोषणा, भारतभर हलचल
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलँदै गर्दा भारतले विशेष सावधानी अपनाउन शुरु गरेको छ । भारतले कोरोना भाइरसका कारण राजधानी दिल्लीका सबै प्राथमिक स्कूलहरु एक महिनाका लागि बिदा गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै सरकारी कार्यालयमा बायोमेट्रिक हाजिरीमा पनि रोक लगाइएको छ ।
युरोपियन युनियन र भारतका बीच हुनलागेको शिखरवार्ताका लागि तय भएको बेल्जियम यात्रा पनि स्थगित गरिएको घोषणा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेका छन् । केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्षवर्धनले फेला परेका कोरोना संक्रमित सबै ३० जनालाई निगरानीमा राखिएको बिहीबार संसदमा जानकारी गराए ।
विश्वभर फैलँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ३ हजार ३ सय ८३ पुगेको छ । विश्वका ८४ देशमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणबाट ९७ हजार ८ सय ५२ जना संक्रमित रहेको समाचार संस्था सीएनएनले जनाएको छ । चीनको वुहान प्रान्तबाट फैलिएको कोरोनाका कारण चीनमा मात्रै ३ हजार ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । चीनमा मात्रै संक्रमित हुनेको संख्या पनि सबैभन्दा धेरै अर्थात ८० हजार ५ सय ३२ छ ।
त्यस्तै दक्षिण कोरियामा पनि कोरोना संक्रमण फैलनेक्रम बढेको छ । अहिलेसम्म ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६ हजार २ सय ८४ जना संक्रमित छन् । त्यस्तै जापानमा १२, अमेरिकामा १२, फ्रान्समा ७, स्पेनमा ३ हङकङमा २ र इराकमा पनि २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यसैगरि ताइवान, अस्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, स्वीटजरल्यान र बेलायतमा एकएक जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिलेसम्म विश्वभर करिब ३ हजार ३ सय भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने करीब ९१ हजार मानिस संक्रमित छन् । कोरोनाको प्रभावबाट ग्रस्त चीन र भारतमा समेत कोरोनाको संक्रमण भेटिएपछि विश्व स्वास्थ संगठनले नेपाललाई पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा राखेको छ ।
कोरोनाको संक्रमणको सबैभन्दा ठुलो खतरा भनेको अहिलेसम्म उपचार पत्ता लाग्न नसक्दा यसका संक्रमितको मृत्यु हुने संभावना हुन्छ । तर उच्च जोखिममा परेको नेपालले भने अझैसम्म यसबारे सचेतना दिइएको छैन ।हामी कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न केहि टिप्सहरु दिदैँछौं, जसको पालना गरे धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसबारे तपाईंले अनिवार्य थाहा पाउनै पर्ने ९ तथ्य, के भ्रम र के सत्य ?
कोभिड-१९ नाम दिइएको भाइरस नयाँ छ। डाक्टर र वैज्ञानिकहरूले यसबारे धेरै कुरा अझै थाहा पाएका छैनन्, कतिपय कुरा अध्ययनकै क्रममा छन्। खाएपछि निको भइहाल्ने कुनै औषधी बनिनसकेको र पर्याप्त सूचनाको अभावमा धेरै मानिस कोरोनाको डरले त्रसित छन्। कोरोना भाइरससँग हामी सचेत पक्कै हुनुपर्छ तर अतालिनु जरूरी छैन।
३. कोरोना भाइरस अरू फ्लूजस्तो हावाका माध्यमबाट सजिलै एउटा बिरामीबाट अर्कोमा सर्दैन। कोरोना भाइरसलाई यात्रा गर्न कुनै माध्यम चाहिन्छ। जस्तो हाँछ्यु गर्दा, खोक्दा वा बोल्दा हाम्रो शरिरबाट निस्कने थुक, र्‍याल आदिमा चढेर यो बाहिर निस्कन्छ। त्यसरी बाहिर निस्केर सिधै अर्को मानिसको नाक, मुख र आँखामा नपरेसम्म यो शरिरभित्र पस्न सक्दैन। अर्थात हाम्रो छालाबाट कोरोना भाइरस सोझै हाम्रो शरिरमा छिर्दैन।
मानिसले हाछ्युँ गर्दा वा खोक्दा थुक, खकार, र्‍यालका छिटाहरू एक मिटर परसम्म जान सक्ने भएकाले डाक्टरहरूले संक्रमित मानिससँग कम्तिमा एक मिटरको दूरीमा बस्नु सुरक्षित हुने सल्लाह दिएका छन्।
८. जसरी कोरोना भाइरस संसारभर फैलिरहेको छ त्यसरी नै नेपालमा मास्कको माग बढेको छ र अभाव सिर्जना भएको छ। कोरोना भाइरस हावाका माध्यमबाट मात्र सर्न नसक्ने भएकाले मास्क लगाउनु आफैंमा महत्वपूर्ण छैन। यद्यपी मास्क लगाउँदा तीन किसिमले हामीलाई फाइदा पुग्छ। पहिलो, यसले संक्रमित व्यक्तिबाट भाइरस बोकेका थुक, खकार र र्‍यालका छिटा तपाईंको नाक-मुखमा पर्न दिँदैन।
दोस्रो, कति मानिसलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भए पनि लक्षणहरू देखिँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा थाहै नपाई अरूमा भाइरस सर्नसक्छ। मास्क लगायो र हाँछ्यु गर्दा नाकमुख छोप्यो भने अरू मानिसमा भाइरस जाने सम्भावना कम हुन्छ। तेस्रो, मास्क लगाउँदा अनुहारमा अनावश्यक छुने क्रम घटन सक्छ। मास्क निकाल्दा र लगाउँदा कानतिरबाट गर्न सकिन्छ। तर मास्क लगाएर नाकमुखबाट घरिघरि तलमाथि सार्ने गरे झन् जोखिम बढ्न सक्छ।
९. सबै रूघाखोकी वा ज्वरो कोरोना भाइरस लागेर हुँदैनन्। त्यसै पनि नेपालमा अहिले मौसम परिवर्तन भइरहेको छ। चिसोबाट गर्मी मौसम लाग्दा कतिलाई मौसमी रूघाखोकी देखिन सक्छ। त्यस्तोबेला आँत्तिनु हुँदैन। अस्पताल गएर चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण भइहालेछ भने पनि अस्पताल जाँदा केही दिनको उपचारपछि निको हुन्छ। किनकी अहिलेसम्म कोरोना भाइरस लागेका ५५ हजार १ सय ८५ जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्।